विश्व स्वास्थ्य दिवस बिशेष अडियो सामाग्री
विकासको नाममा जिवनलाई मेशिनजस्तै वनाईदै छ, धेरै कमाउनु अनि गज्जबको जिवनशैली जिउनु नराम्रो त पक्कै पनि हैन तर त्यो ब्यस्त जिवनमा घरि घरि आफ्ना लागी समय निकालेर मुस्काउन अनि भएका कुराहरुको लागी खुशी हुदै पछाडि पर्खेर हेर्न भ्याईरहेको छैन् ।
यहाँ घर वनाउन कसरत गर्नेहरुले परिवार गुमाईरहेका छन्, ओच्छ्यान सजाउन खर्च गर्नेहरुले निन्द्रा गुमाईरहेका छन्, पिउन रहर गर्नेहरुले प्यास गुमाईरहेका छन् अनि गुमिरहेको छ जिवन जिउने कलाहरु ।
समाचार अनि पत्रिकाहरुमा दिनँहु जसो आत्महत्याका समाचारहरु अनि परिघटनाका श्रृखलाहरु , यो वा त्यो ढगंमा हामीले सुनिरहेका हुन्छौ । कारण एउटै छ, हामीले आधुनिक यूगमा जिवन जिउने कलाहरु हराईरहेका छौ । हामीहरु धेरैजना डिप्रेशनका शिकार भईरहेका छौ, नहाँसेको अनि नमुस्काएको या झुठो मुस्कानको सहारामा हामी जिईरहेका त छैनौ ।
डिप्रेशन, आज यसै कुराको चिरफार गरौ अनि जिवनमा मुस्काउने कारणहरु खोजौ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका विश्वब्यापी शाखाहरु अनि सरकारहरुले यसवर्षको ७ अप्रिलको विश्व स्वास्थ्य दिवसको उपलक्ष्यमा डिप्रेशनका वारे जनचेतना फैलाउनकालागी , यस २०१७ सालको विश्व स्वास्थ्य दिवसको नारा नै डिप्रेशन दिएको छ । हरेक वर्षको अप्रिल ७ का दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाईन्छ । वास्तमा अप्रिल ७ का दिनमा विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लु एच ओ को स्थापना पनि भएको ो र यसै दिनको अवसरमा हरेक वर्षको अप्रिल ७ मा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाईन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्व भरिनै स्वास्थ्य अनि उपचारका लगायत विभिन्न प्रकोप अनि महामारीक विरुद्ध लड्नकालागी समुदाय र सरकारहरुलाई सघाँउदै आएको छ ।
हरेक उमेर समुहका मान्छेहरुमा डिप्रेशन देखिन सक्दछ अनि समयमै उचित साथ र सहयोग अनि उपचार नपाएमा यो डिप्रेशनले भयावह रुप लिन्छ । मान्छेले आफ्नौ दैनिक कामहरुपनि सहज रुपमा गर्न नसक्ने वनाँउदै अन्र्तमुखी अनि नचाहिने त्रास अनि पिडाहरुले मन भरिन्छ । १५ देखि २९ वर्षसम्मका मान्छेहरुको आत्मत्याको मुख्य कारक तत्व यहि डिप्रेशनलाईनै मानिन्छ ।
तर डिप्रेशनको उपचार संभव छ, अनि यो सहजरुपमा आत्मीय साथको माध्यमवाट गर्न सकिन्छ । जिवन भनेकै सुख्ख अनि दुख्खको अनुपम मिश्रण हो, वेलावखतमा आईपरिरहने यी दुख्ख अनि सुख्ख सँग डराएर जिवनसीत हार मान्नु हाम्रो नियती त होईन नि ? कि कसो ? आउनुहोस डिप्रेशन हुनुवाट आफू पनि जोगिऔ अनि अरुलाई पनि जोगाऔ है ।
अब्यवहारीक अनि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धावाट आफू र अरुलाई जोगाऔ है । फलानाको छोरा या छोरीले यसो गरे, यति कमाए अनि विदेश ग एभनेर आफ्नाहरु सित तुलना गरिनु नेपाली घर अनि समाजको नियती बनेको छ, जुन राम्रो हैन ।
हरेक मानवका जिवन अनि उदेश्य फरक फरक हुन्छ । आआफ्ना वाटाहरु हुन्छन अनि गन्तब्य पनि । हातका औलाहरु त समान छैन भने जिवन कसरी समान हुनसक्छ र ? फेरि जिवनको उदेश्य खाली पैसा, पढाई, रमाईलो अनि देखावटी हाँसोमात्र पनि हैन नि ?
जिवन एउटा सन्तुलन हो, सन्तुलित तवरले सहज रुपमा अगाडि बढ्न सके, हामीहरुमा कोही पनि असमान अनि साना या ठूला छैनौ है ।
नपत्याए हेर्नुस न यि पानीहरुलाई ? कति सरल रुपमा वर्खाको पानी धनी र गरीब दुबैको घरको छतमा बराबर पारीदिन्छ । घामका टुक्राहरु धर्तीमा पर्दा धनी र गरीबलाई फरक फरक पर्दैनन अनि त्यसै गरि अगाडि वढ्ने अवसरहरु हामी सबैकालागी समान नै छ है ।
जिवन लामो छ, पृथ्वी गोाले छ अनि यहाँ थुप्रै दोवाटाहरु छन्, कहिँ न कहि हामी अनि हाम्रा सपनाहरुको भेट हुन्छ नै ।
दुख्ख यहाँ सबैलाई छ, कसैलाई वढी अनि कसैलाई कम तर दुख्खलाई पनि पर्वजस्तै मनाँउदै अनि मुस्काउदै अगाडी वढौ ।
मुस्काउनुहोस, मुस्कान बाँढौ किनभने यहाँ मुस्कानको पैसा लाग्दैन अनि संसारमा मुस्काउने धेरै कारणहरु छन् । दैनिक ब्यायाम अनि सामाजिक क्रियाकलापहरुमा पनि समय ब्यतित गरौ, मान्छे भेटौ, बुझौ अनि मुस्काईरहौ ।